Faa’iidooyinka iyo Caqabadaha ka jira Caalamka – USE24 GLOBAL MANAGEMENT COSULTANT
Faa’iidooyinka iyo Caqabadaha ka jira Caalamka
Su’aal kama taagna – adduun-weyneynta ayaa is-beddeshay dunida casriga ah. Waxay qaabeysaa, wayna sii socon doontaa qaabeynta, qaabka dadku u ganacsadaan, u safraan, uguna xirmaan. Globalisation waxay bixisaa faa iidooyin faro badan, laakiin waxay kaloo la timaadaa cawaaqib xumo dhaqaale iyo mid dhaqan oo adkaan karta marinkeeda. Maaddaama caalamiyeynta ay sii wadeyso inay qaabeyso isdhexgalka adduunka ee ganacsiga, tikniyoolajiyadda, iyo inbadan, shirkaduhu waxay u baahan doonaan inay fahmaan faa’iidooyinkeeda iyo caqabadaha jira labadaba.
Waa Maxay Globalisation?
“Globalisation” waxaa loola jeedaa isku xirnaanshaha wadamada iyadoo loo marayo xiriiro kala duwan, laga bilaabo ganacsiga, juquraafi ahaan, iyo tikniyoolajiyadda safarka, dhaqanka, iyo warbaahinta.Qiyaas labo jiinis oo ku dhex jira suuqa oo “lagu sameeyay Shiinaha sumaddiisa” gudaha.Qiyaas dukaamada McDonald ee ka soo baxa Ukraine iyo Vietnam, iyo Ameerikaanka oo soo noqnoqda maqaayadaha Hindida ee Montana iyo gawaarida falafel ee New York.Bal qiyaas dhakhtar ku sugan Chicago oo akhrinaya The New York Times iyo the Guardian iyo Al Jazeera. Bal qiyaas wiil dhalinyaro ah oo reer Poland ah oo dhagaysanaaya Rihanna habeenki iyo subaxdii iyadoo diyaarinaysa boorsadeeda Fjallraven-Kanken oo iskuulka u diyaarisay, halkaas oo ay ku aqrinayso Proust, Dostoevsky, Murakami, iyo Bolaño fasalkeeda suugaanta. Qiyaas wicitaan ganacsi oo lala yeesho xubno ka socda sideed dal oo kala duwan.Qiyaas hawlgal wada jir ah oo nabad ilaalin ah oo ka socda Qaramada Midoobay kaas oo ummadaha kala duwan ee xubnaha ka ah ay ku midoobayaan xoogooda si loo badbaadiyo nolosha qaarad kale.Caalamiyeynta ayaa ogeysiineysa dhammaan xaaladahaas. In kasta oo ay noqotay wax caadi ah in la dhaho, haddana waa run in adduunku sii yaraanayo. Waxaad u adeegsan kartaa taleefan si aad ula xiriirto qof isla markiiba, iyadoo aan loo eegin inta uu adduunka ka fog yahay qofkaasi.Waad awoodi kartaa Skype, qoraal, ama isticmaali kartaa Whatsapp.Waxaad raaci kartaa diyaarad saacado gudahoodna waxaad ka soo muuqan kartaa adduunka badhkiis.Caalamiyeynta waa qeyb ka mid ah adduunka sii yaraanaya, oo isu keenaya dadka ujeeddooyin guud – ama tartan.
Sidee Caalamku u saameynayaa Ganacsiyada In kasta oo, dabcan, shirkado caalami ah ay u arkaan caalamiyeynta dhinac kasta oo ganacsi, xitaa bilowga yar iyo ganacsiyada ay ganacsaduhu hoggaamiyaan waa la saameyn doonaa. Caalamku wuxuu siyaabo kala duwan u saameeyaa ganacsiyada:
Furida suuq ballaaran oo kaladuwan
Waxaa kordhay qulqulka ganacsiga, raasamaalka, macluumaadka iyo dadka
Dhiirigelinta shaqaale kala duwan
Tartanka sii kordhaya: Ganacsiyada ku tartamaya suuqa adduunka ayaa si dabiici ah tartan ugala kulmi doona shirkadaha adduunka oo dhan. Macaamiisha waxay dalbadaan alaab tayo sareysa oo ka raqiisan, markay leeyihiin shirkado caalami ah oo ay kala doortaan, kaliya kuwa u xuubsiiban si ay u gaarsiiyaan waxa ay macaamiishu doonayaan oo ay u baahan yihiin ayaa barwaaqoobi doona.Tartankan kordhay waxay ka dhigan tahay in shirkaduhu ay la socdaan horumarka soo socda isla markaana ay ku adkaystaan ​​suuqa adduunka si ay u noolaadaan.
Furitaanka suuqyo waaweyn, oo kaladuwan: Dhinaca kale, shirkadaha isu fura suuqyada adduunka waxay si dabiici ah u heli doonaan suuq aad uga ballaaran oo ay ku iibiyaan adeegyadooda. Waxay leedahay a
Soo saaraha Baaskiilada korontada ee Reer Galbeedka ayaa laga helay guul xaddidan dal ay baabuurtu weli boqor u yihiin?Waxay u leexan kartaa suuqyada Aasiya, halkaas oo cufnaanta dadku ay horseedday burburin taraafikada gawaarida iyo suuq weyn oo loogu talagalay gaadiidka fudud ee korontada.Awoodda lagu ogaanayo laguna daboolayo suuqyada adduunka oo dhan waa mid ka mid ah racfaannada caalamiga ah.
Kordhinta qulqulka ganacsiga, raasamaalka, macluumaadka, iyo dadka: Tusaha Iskuxirka Caalamiga ah ee DHL, oo ​​lala kaashanayo NYU’s Stern School of Business, wuxuu aqoonsaday afartan walxood inay yihiin afarta tiir ee isku xirnaanta aduunka. Dhamaan cunsurradan marka laga reebo raasamaalka waxay arkeen koboc dhexdhexaad ah adduunka oo dhan sanadka 2018.
Wadaagista tikniyoolajiyadda: Si waddamadu ay awood ugu yeeshaan iskaashiga adduunka, waa inay wadaagaan teknoolojiyad la mid ah iyo kaabayaasha teknolojiyadda Baahida loo qabo tiknoolajiyada la wadaago waxay ka dhigan tahay in horumarka tikniyoolajiyaddu si dhakhso leh ugu socdaan adduunka.
Wadaagista aqoonta: Sidoo kale, baahida loo qabo aasaaska aqoonta dhexe ee wadashaqeynta waddamada inay ka shaqeeyaan macnaheedu waa isku-xirnaanta caalamiga ah waxay keenaysaa in si dhakhso leh loogu wareejiyo aqoonta. Horumarka cilmiyaysan ee laga sameeyay Biljimka wuxuu noqon karaa Japan iyadoo taabashada badhanka.
Dhiirrigelinta shaqaale kala duwan: Ganacsiyada adduunka ka shaqeeya waxay soo jiitaan shaqaalaha adduunka oo idil. Waxay u badan tahay inay shaqaalaha maamulka ka soo qaataan wadamada ay joogitaankooda joogteeyaan isla markaana ay shaqaaleysiiyaan shaqaale ka shaqeeya wadan ay xoogaa shaqaale ahi ka jaban yihiin.Barashada maareynta shaqaale dhaqameed kala duwan waxay labadaba u noqon kartaa waxtar iyo caqabad ganacsi caalami ah.
Faa’iidooyinka ay leedahay isku xirnaanshaha caalamigaMaxay yihiin faa’iidooyinka ay ku leeyihiin ganacsiga caalamiga ah? Iskaashiga caalamiga ahi wuxuu leeyahay faa iidooyin badan oo la taaban karo.1. socodka caasimada oo kordhayFaa’iidooyinka dhaqaale ee ay ku leedahay adduunka intiisa badani way adag tahay in la iska indhatiro. Kordhinta ganacsiga suuqyada waaweyn iyo kuwa kaladuwan waxay keeneysaa dakhli badan iyo wax soosaarka guud ee gudaha oo kordhay. World GDP wuxuu ka koray qiyaastii $ 50 trillion sanadkii 2000 ilaa $ 75 trillion sanadkii 2016, ugu horreyntii waxay ku timid isku-tiirsanaanta dhaqaalaha iyo kororka ganacsiga adduunka ee ay u oggolaato.Hindiya, tusaale ahaan, waa waddan waxsoosaarkiisa waxsoosaarku si weyn uga faa’iideystay caalamiyeynta waaxda tikniyoolajiyadda:• Mareykanku wuxuu ku tiirsan yahay Hindiya kalabar adeegyadiisa kombiyuutarka ee laga soo waarido.• Hindiya waxaa ku kordhay qiimaha adeegyadiisa kumbuyuutar ee laga dhoofiyo $ 11 billion sanadkii 1995 ilaa 2015 ku dhowaad 110 billion.• Kobaca dhaqaalaha Hindiya wuxuu si aad ah isugu xirmay kororkaan, celcelis ahaan sanadkii 6.5% sanadkii.Caalamiyeynta ayaa sidoo kale ka dhigan in ganacsiyada ay ku xaqiijin karaan macaash badan iyaga oo dhex galaya suuqyada aan hore loo taaban iyo ka faa’iideysiga qiimaha hoose ee maxalliga ah. Markii ay ku fidaan dalal cusub, ganacsatadu waxay gaaraan suuqyo u gaajaysan alaabooyinkooda ugubka ah isla markaana doonaya inay ku bixiyaan dollarka ugu sarreeya iyaga. Waxay ku guuleysan karaan dakhliyada sare ee suuqyada aan qanacsaneyn iyadoo lacag lagu keydsanayo qaab dhismeedka qiimaha hoose ee ka dhasha shaqada jaban, kirada, iyo qalabka.
2. Alaabta Kafiican Qiimaha Hoose Tartanka caalamiga ah ee suuqyada ayaa horseed u ah tayo iyo awood labadaba. Maaddaama macaamiisha ay ogaadeen inay haystaan ​​xulashooyin kala duwan oo ka kala imanaya adduunka oo dhan, waxay dooran doonaan inay iibsadaan xulashooyinka ugu fiican uguna jaban, iyagoo uga baahan shirkadaha inay kor u qaadaan tayada oo ay bixiyaan qiimo jaban haddii ay doonayaan inay sii ahaadaan tartan.Bixinta shaqadu waxay sidoo kale gacan ka geysaneysaa hoos u dhaca qiimaha, maaddaama shirkado badan ay shaqaaleysiiyaan shaqaale ajnabi ah si ay u qabtaan shaqada mushahar ka yar.3. Wadashaqeynta iyo Kheyraadka WadaaggaIsku darka dadaallada iyo ilaha waxay u oggolaaneysaa hal-abuurnimo iyo hal-abuurnimo dheeri ah si loo xalliyo dhibaatooyinka saameeya dadka adduunka oo idil.Dadaallada ilaalinta iyo dadaallada lagula dagaallamayo qiiqa kaarboon sii daaya, tusaale ahaan, waxay u baahan doonaan dadaal caalami ah oo urursan haddii ay guuleystaan. Ururada aan dawliga ahayn (NGOs) waxay adeegsadaan hanaan iskaashi si wax looga qabto arrimaha aan ku xaddidnayn xuduudaha, sida shaqaaleynta carruurta, tahriibinta dadka, iyo daryeelka caafimaadka iyo ka hortagga cudurrada. 4. Isweydaarsiga Dhaqamada Kala Duwan Dhammaan faa iidooyinka caalamiga ah ma ahan kuwa ka dhaca qiyaasta balaayiin iyo trilyan oo doollar. Isdhaafsiga dhaqamada kaladuwan ee fikradaha, cuntada, muusiga, warbaahinta, iyo luqadduba waa qiimo badan yihiin. Shakhsiyaadka adduunka oo dhan ugu socdaala ganacsi ama firaaqo oo tijaabiya cuntooyin kala duwan, dhagaysta muusig kala duwan, akhriya buugaag kala duwan, u soo gaadhista qaybaha kala duwan ee warbaahinta, oo barta inay isu muujiyaan, xitaa si liidata, luqad kale waxay ka helaan aragti ballaadhan adduunka. . Aqoontooda cusub waxay gacan ka geysaneysaa kobcinta naxariis iyo qaddarinta dadka dhaqamada kale.5. Fidinta Aqoonta iyo Teknolojiyada Waxaa lagu doodi karaa in mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu sareeya ee caalamiyeynta ay noqotay faafitaanka degdegga ah ee tikniyoolajiyadda adduunka oo dhan. Google, Dell, iyo Microsoft, tusaale ahaan, dhammaantood waxay xafiisyo ku leeyihiin qaarado badan. Wadamada soo koraya ayaa inta badan ka codsada maalgashadayaasha fursada weyn ee koritaanka.Horumarka ka dhashay waxay keeneysaa natiijooyin sida faafidda mashiinnada mootada ee Koonfur-bari Aasiya, tusaale ahaan, halkaasoo markii hore ay ka jiri jireen oo keliya shaqooyinka gacanta
NGO-yada sidoo kale waxay uruuriyaan oo faafiyaan aqoonta. Markii xirfadlayaasha caafimaadka ee adduunka oo dhami ay isugu yimaadeen Dhakhaatiirta Aan Xudduudda Lahayn, iyagoo kaashanaya Ururka Caafimaadka Adduunka, ayna ka shaqeeyeen ciribtirka SARS ee Vietnam, waxay diyaariyeen “xirmada ‘SARS’ ka dib waxayna soo saareen tilmaamo lagula tacaalo cudurka. Waxay la wadaageen qalabkan adduunka oo dhan si ay uga caawiyaan isbitaalada wax ka qabashada cudurka. 6. Horumarka Tikniyoolajiyadda Degdega ahWadamada soo koraya, gaar ahaan, in laga boodo hanaan socodka horumarka farsamada dheer ee wadamada warshadaha horumaray waxay u keenaysaa horumar deg deg ah. Tusaale ahaan, taleefannada gacanta ayaa si dhaqso ah ku yimid qaaradda Afrika, iyadoo adeegsiga taleefannada gacanta xilligan lagu sii kordhayo sannad kasta waddamada ka hooseeya Saxaaraha ee Afrika isla markaana ku soo dhowaanaya 90% waddamo ay ka mid yihiin Koonfur Afrika. Qaadashada degdegga ah ee tikniyoolajiyadda moobiilka ayaa dhiirrigelisay hal-abuurnimada waddammada sida Kenya oo kale ah.Meesha ay halista ku tahay ama ay adag tahay in la safro, milkiileyaasha ganacsiyada yaryar waxay si fudud u isticmaalaan taleefannadooda gacanta si ay ula xiriiraan macaamiisha iyo qandaraasleyda.Inta badan dadka reer Kenya ma helaan bangiyo ama akoonno bangi, laakiin waxay u isticmaali karaan taleefannadooda inay u diraan oo ay u helaan lacag, iyagoo adeegsanaya barnaamij qoraal ku saleysan maaddaama inta badan taleefannada gacanta ee dalku aysan ahayn kuwa casriga ah. Waxay sidoo kale u isticmaali karaan taleefoonadooda si ay ula socdaan qiimaha dalagyada isla markaana ay u ogaadaan suuqyada lacag badan keeni doona Horumarka tikniyoolajiyadda degdega ahi wuxuu leeyahay faa iidooyin aan ahayn kuwa dhaqaale. Haweenka uurka leh ee aan helin daryeel caafimaad dhaqameed waxay isticmaali karaan taleefannadooda si ay ula xiriiraan umulisooyinka.Umulisooyinka, ayaguna, waxay adeegsadaan taleefannadooda si ay ugu xirmaan nidaam ay dhakhaatiirtu kormeeraan saacadaha oo dhan. Heerka dhimashada dhallaanka ee Kenya, gaar ahaan xaafadaha isku raranta ah, waa mid ka mid ah 50-ka adduunka ee ugu sarreeya, laakiin caalamiyeynta waxay siisay qalab caawiya wax ka qabashada qaar ka mid ah dhibaatooyinka la xiriira daryeelka ka hor iyo umusha.7. Kordhinta Dakhliga QoyskaXarunta Yurub ee Dhaqaalaha Siyaasadeed ee Caalamiga ah ayaa ku warramaysa in caalamiyeynta ay gacan ka geysatey yareynta sicir bararka sare ee dhaqaalaha reer galbeedka, sidaa darteed dollar kasta oo ka mid ah kharashka macaamiisha uu sii socdo. Horumarkan ayaa sidoo kale leh saameyn kororka mushaharka dhabta ah iyadoo hoos loo dhigayo qiimaha nolosha. Intaa waxaa sii dheer, tartanka suuqa adduunka wuxuu ka dhigan yahay qiimaha alaabooyin badan inay hoos u dhaceen, sidaa darteed iibsiyada markii horeba ahaa kuwa raaxada aan la awoodi karin, sida laptop-ka, baabuurta, iyo mashiinnada dharka lagu dhaqdo, ayaa hadda dad badani u awoodi karaan.8. Maskax Furan iyo DulqaadWay u fududahay dadku inay ka baqaan dadka kale ee aan waligood la kulmin. Shisheeyayaashu waxay umuuqdaan kuwo gebi ahaanba aan lagu aqoon xaaladaha noocaas ah. Laakiin haddii dadku xiriir la sameeyeen dad kale oo ka yimid meelo kale oo adduunka ah, oo ay kala hadleen dhibaatooyinka guud, oo ay kaqeyb qaataan cunnadooda iyo dhaqankooda, waxay sifiican u awoodaan inay gartaan dadnimadooda guud oo ay ula dhaqmaan kuwa kale sidii dad la mid ah.Caqabadaha CaalamiyeyntaWay cadahay in caalamiyeynta ay bixiso faa iidooyin fara badan adduunka – laakiin waa maxay caqabadaha ka jira caalamiyeynta? Waa kuwan wax yar.1. dhiig-miirashadaShirkadaha Mareykanka waxaa lagu yaqaan inay adeegsadaan dhidid dhidid shaqaale shisheeye si ay u sameeyaan alaab Mareykan ah oo raqiis ah. Wadamada hodanka ah, kuwa warshadaha leh waxay qashinkooda u rarteen Shiinaha iyo Malaysia. Ka faa’iideysiga suuqyada jaban iyo xeerarka habacsanaanta ee dalalka soo koraya waxay sababeen wasakheynta iyo dhibaatada dalalkaas, xitaa iyadoo macaashku uu kor ugu sii kacayo dibadda.Miinooyinka ku yaal Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Koongo, halkaas oo biraha loo baahan yahay elektaroniga ay ku badan yihiin – dahab iyo tungsten, daasado iyo tantalum – kooxo maleeshiyo hubeysan ah, oo inta badan adeegsada askarta carruurta, ayaa la wareegay, iyagoo awoodda ku ilaalinaya rabshado iyo ka ganacsiga macdanta qoryaha In kasta oo qiimaha dahabka adduunku uu laba jibaarmay 10 sano ka dib korantada elektarooniguna ay waligeed ka jaban tahay, haddana caalamiyeynta kama yarayn saboolnimada iyo rabshadaha waddanka ka jiraSharciga Dodd-Frank ee laga soo saaray dalka Mareykanka ayaa hada u baahan shirkadaha in ay noqdaan kuwa hufan oo ku saabsan sida ay agabkooda u soo saaraan, laakiin kaliya 10% ka mid ah miinooyinka bariga Congo ayaa lagu dhawaaqay in aysan colaad ka jirin.Bixinta shaqaaluhu waxay sidoo kale reebaysaa shaqooyin ka jira dalalka warshadaha horumaray, halkaasoo shaqaaluhu qaali yahay. Markuu Mareykanku u gacan galiyo wax soosaarka kuwa ka jaban tartamayaasha suuqyada shisheeyaha, xoogsatada wax soosaarka gudaha ayaa shaqadooda waayi doona. Shaqo la’aanta badan waxay keentaa qanacsanaan la’aan, culeys saar shabakadda badbaadada bulshada, iyo hoos u dhigista dakhliga canshuuraha. Xoogsatada aan xirfadahoodu ku habboonayn suuqyada adduunka ayay ku adkaan doontaa inay la qabsadaan adduunyada ay ku badan tahay caalamiyeynta.2. Qiimaha Maalgashiga SareCaalamiyeynta waxay caqabado u muujineysaa shirkadaha caalamiga ah xagga maalgashiga raasamaalka iyo hogaaminta. Aasaasidda ganacsi dal cusub, gaar ahaan waddan soo koraya, waxay u baahan tahay raasamaal horudhac ah oo hor leh. Kaabayaasha loo baahan yahay waxaa laga yaabaa inaysan meesha oolin.Wadooyinka, shabakadaha korantada, internetka ballaadhan, biyaha, iyo nadaafadda ayaa laga yaabaa inay u baahan yihiin in kor loo qaado ama laga horumariyo meel laga soo bilaabay. Sidoo kale way adkaan kartaa in la helo oo la haysto maamuleyaal leh xirfadihii loo baahnaa si loogu kordhiyo qiimaha shirkadda isla markaana si wax ku ool ah looga dhex shaqeeyo dhaqanka maxalliga ah.3. Nidaamyada Deegaanka oo wareersanShirkadaha caalamiga ah waxay sidoo kale la kulmaan caqabadda ah inay kula tartamaan sharciyo kala duwan dalal kala duwan. Mararka qaarkood waa inay la tartamaan noocyada kala duwan ee nidaamyada sharci iyo bangiyada gebi ahaanba. Dhibaato ka haysashada hagida nidaamyadan waxay u horseedi kartaa caqabado ku sii fida dalal cusub iyo cilado aad u daran oo ku saabsan tallaabooyinka khaldan ee la sameeyay.4. Xeerar LiitaIn yar oo hay’ado sharciyeyn ah ayaa u jira shirkadaha ganacsiga caalamiga ah. Raadinta suuqyada caalamiga ah waxay markaa mararka qaarkood dareemi kartaa sida West West. Suuqyada iskuxiran sidoo kale macnaheedu waa iyada oo aan la xakamayn, haddii wax qaldamaan, cawaaqibta ayaa si caalami ah uga soo bixi doonta. Dhibaatada dhaqaale ee adduunka, tusaale ahaan, waxay ku dhacday quruumo badan.5. Caqabadaha soo galootigaTirada soo galootiga iyo qaxootiga oo sii kordheysa ayaa caqabad ku ah wadamada horumaray. In kasta oo waddammadu ay jeclaan lahaayeen inay caawiyaan, qulqulka aad u ballaaran ayaa culeys saaraya ilaha iyo qaababka bulshada. Wadamadu waxay isku arkaan inay ku xadidan yihiin gargaarka ay bixin karaan iyagoon wax u dhimeyn muwaadiniintooda6. Khasaaraha Shaqo ee DeegaankaCaalamiyeynta waxay gacan ka geysan kartaa hoos u dhaca fursadaha shaqo maadaama shirkaduhu u wareejinayaan xarumahooda wax soo saarka waddamada dibedda. Forbes waxay soo werisay in tallaabada loo qaaday dhanka caalamiyeynta ay horseedday in warshadayn laga sameeyo dalka Mareykanka oo dhan, kaasoo mar hoy u ahaa warshado badan oo dheeraad ah iyo dhirta baabuurta. Markay shirkadaha Mareykanku u wareejiyaan wax soo saarkooda Shiinaha iyo dalal kale shaqooyin faro badan oo raqiis ah, shaqaalaha Mareykanka waxay ku dhibaatoodaan xiritaanka warshadaha, shaqo ka joojinta, iyo heerka shaqo la’aanta cirka isku shareertay. Sida laga soo xigtay Machadka Siyaasadda Dhaqaalaha, hoos u dhaca ganacsiga ee Mareykanka iyo Shiinaha – taas oo ah, xaddiga alaabteenna la soo dejiyo, taas oo qaali ka dhigeysa shaqooyinka Mareykanka, in ka badan dhoofkeenna, taas oo u muuqata inay iyaga siiso – ayaa lumisay Mareykanka 3.4 milyan oo shaqo tan iyo 2001.Wada-hawlgalayaasha Caalamiyeynta ayaa kaa caawin kara dadaalladaada ku saabsan GlobalisationJeclaaw ama ha jeclaan, caalamiyeynta waa awood awood u leh koritaanka iyo horumarka, waxayna adduunyada ku beddeleysaa qaabab saameyn ballaaran ku leh, mararka qaarna aan la saadaalin karin. Jiilkeenna iyo jiilalka mustaqbalka ayaa ku dadaali kara inay horumariyaan isku xirnaanshaha iyo horumarka adduunka oo dhan. La xiriir Iskaashatada Caalamiga ah si aad u ogaato sida shirkaddaadu ula xiriiri karto uguna fiicnaan karto shabakad iskaashi caalami ah.